IcePop cocktail: tian’ny tanora ny zava-pisotro malefaka | NewsMada
IcePop cocktail: tian’ny tanora ny zava-pisotro malefaka
Miova ny fitiavana zava-pisotro ! Nilaza ny tompon’andraikitra ara-barotry ny orinasa Royal spirits, fa be loatra ny olona misotro zava-pisotro misy alikaola mahery. Nahatsapa koa anefa izy ireo, fa miova tsikelikely izany ankehitriny, fa mirona any amin’ny heriny malefaka indray ny tanora amin’izao vanim-potoana izao. Izay no nahatonga azy ireo namoaka ny vokatra IcePop cocktail, misy karazany telo. Mampiavaka ireo zava-pisotro ireo ny tsy fisian’ny alikaola (Virgin Mojito), na koa tena kely ny tahan’ny alikaola (6%), ny Mojito sy ny Tequila Sunrise.
Hamantarana azy ireo koa ny fonony amin’ny endriny miavaka sy vita amin’ny akora manokana malefaka (Doypack) tsy manimba ny fahasalamana, azo tahirizina maharitra anaty vata fampagatsiahana sady mitazona ny hatsiaka.
Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny vokatry ny Royal Spirits, manana ny mari-pamantarana Iso 9001 sy ny mari-pahalalana HACCP+. Voahaja ny fahadiovana, fantatra avokoa ny fiavian’ny vokatra, miainga any amin’ny akora afototra, ny akora nampiasaina ary miafara hatrany amin’ny mpanjifa.